Muujinta isleeg ka 26 ilaa 29 Bogga 6 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
CO + Na2O → 2Na + CO2
carbon monoxide sodium xabagta sodium carbon dioxide
(xoog leh) (trung) (Akhriso) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Equation CO + Na2O → 2Na + CO2
What is reaction condition of CO (carbon monoxide) reacts with Na2O (sodium oxide) ?
Sidee fal-celintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Na (sodium) iyo CO2 (kaarbon dioxide)?
Phenomenon after CO (carbon monoxide) reacts with Na2O (sodium oxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CO + Na2O → 2Na + CO2
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CO2 (sodium oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CO2 (kaarbon dioxide) badeecad ahaan?
C + 2Na2O → 4Na + CO2
kaarboonka sodium xabagta sodium carbon dioxide
(ka) (trung) (Trang BAC) (xoog leh)
1 2 4 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta C + 2Na2O → 4Na + CO2
Waa maxay xaaladda falcelinta C (kaarboon) ee Na2O (sodium oxide)
Isku qas qadar yar oo ah budada sodium oxide iyo budada dhuxusha, ka dibna ku rid gunta hoose ee tuubada tijaabada qalalan, kulayl
Dhacdada ka dib C (kaarboon) waxay la falgashaa Na2O (sodium oxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada C + 2Na2O → 4Na + CO2
3Na2O + 2NH3 → 3H2O + N2 + 6Na
sodium xabagta ammonia biyaha nitrogen sodium
(rnn) (kh) (lng) (kh) (rnn)
(trung) (xoog leh) (xoog leh) (xoog leh) (sax ah)
3 2 3 1 6 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3Na2O + 2NH3 H 3H2O + N2 + 6Na
Waa maxay xaalada falcelinta ee Na2O (sodium oxide) ay kaga falceliso NH3 (ammonia)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo N2 (nitrojiin) iyo Na (sodium)?
Ka gudub gaaska ammonia tuubo dhalo ah oo ay ku jirto sodium oxide kulul
Dhacdada ka dib Na2O (sodium oxide) waxay la falgashaa NH3 (ammonia)
Marka laga reebo inay tahay saldhig daciif ah, ammonia waxay kaloo muujineysaa yareynta hantida. Markii la kululeeyo, ammonia waxay yareyn kartaa qaar ka mid ah oksaydhka biraha (marka laga reebo oksaydhka sodium, potassium, barium, calcium, magnesium)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3Na2O + 2NH3 H 3H2O + N2 + 6Na
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Na (ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na (sodium) badeecad ahaan?
Muujinta isleeg ka 26 ilaa 29 Page 6